GoPro dia manolotra ny GoPro Hero 5 tsy tantera-drano ary manaiky ny baikon'ny feo | Vaovao momba ny gadget
GoPro dia manolotra ny GoPro Hero 5 tsy tantera-drano ary manaiky ny baikon'ny feo
Volana vitsivitsy lasa izay, nanambara ny orinasa mpaka sary mihetsika GoPro fa hiala amin'ny tsenan'ny tetibola hifantoka amin'ny modely matihanina indrindra fotsiny izy. Mazava ny antony: ny tsena dia feno an'ity karazana fakantsary niavian'ny sinoa ity amin'ny vidiny ambany kokoa ho an'ireo maodely fototra nomen'ny GoPro anay. Mazava ho azy, ny kalitao koa dia lavitra ny zavatra natolotry ny GoPro tamin'ireny maodely ireny. Volana maromaro taty aoriana, GoPro dia nandefa ny taranaka fahadimy amin'ny fakantsary fanatanjahan-tena, Hero 5, izay manohy maniry ny ho loharanom-pahalalana amin'ny tsena.
Ireo maodely vaovao natolotry ny orinasa dia ny Hero 5 Black sy ny Session. Ny kinova Hero 5 Black dia manome antsika famolavolana nohavaozina, izay nampiana fampiasa vaovao raha ny Session Fanavaozana ny maodely natomboky ny orinasa izy io roa taona lasa izay amin'ny endrika goba.
Ny Hero 5 Black dia afaka sary 12 megapixels ary tehirizo amin'ny endrika RAW, efijery roa santimetatra ary mpandray GPS mba hanodinana ny tany ny sarinay sy ny horonan-tsary amin'ny sarintany. Ity maodely vaovao ity izao dia tsy tantera-drano hatramin'ny 10 metatra tsy misy karazana trano ary koa manana ny fanekena ny feo, mety indrindra rehefa tsy manana tanana isika afaka manindry ny bokotra. Izany hoe raha efa voafaritra mialoha ny baikon'ny feo toa ny GoPro manomboka manoratra, mijanona ny firaketana GoPro, maka sary i GoPro ... tsy ho afaka hanomboka resaka amin'ny GoPro izahay. Ny vidiny dia eo amin'ny $ 399,99 ary ho azo amin'ny 2 Oktobra.
Ny Hero 5 Session dia tantera-drano ary na dia tsy afaka maka sary RAW aza izy, mamela antsika hanao azy ireo amin'ny vahaolana hatramin'ny 10 megapixel. Tsy manana GPS na efijery (tsy misy toerana hitazomana azy io). Ity maodely ity dia hamely ny $ 299,99 eo ho eo ihany koa manomboka amin'ny 2 Oktobra.
Amin'ny ahoana raha mifanindry ny fakantsary roa dia izay afaka mirakitra kalitao 4k amin'ny zana-kazo 30 isan-tsegondra izy ireo. Raha te hanitatra ny isan'ny sary isika dia tsy maintsy ahenantsika ny fanapaha-kevitra ho 1080 hahafahana manoratra 120 fps na 2 k kalitao ahafahana manoratra amin'ny 60 fps.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » GoPro dia manolotra ny GoPro Hero 5 tsy tantera-drano ary manaiky ny baikon'ny feo
Ny "Death Star" DLC ho an'ny Star Wars Battlefront dia efa manana daty famotsorana
Ireto ny andiany izay tsy tokony halainao amin'ny volana Oktobra